Hay'adda IOM oo ku Wareejisay Dhisme Iyo Saxiimad Wasaaradda Kalluumeysiga Dowladda Puntland [Sawirro] | SAHAN ONLINE
Hay’adda IOM oo ku Wareejisay Dhisme Iyo Saxiimad Wasaaradda Kalluumeysiga Dowladda Puntland [Sawirro]
Hay’adda IOM ayaa maanta dhisme iyo Saxiimad ku wareejisay Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka Badda Puntland taasoo loogu talagalay dadka kalluumeysatada ah.
Xaflad kooban oo lagu wareejinayey ayaa waxaa ka qeybgalay maamulka gobolka,kan degmada Boosaaso,mas’uuliyiin ka sooctay Hay’adda IOM ,kalluumeysato iyo Wasiir kuxigeenka Wasaaradda.
Madaxa Hay’adda IOM ee Boosaaso Ismaaciil Siciid Cali oo ugu horeyn Xaflada hadal kasoo jeediyey ayaa sheegay in ay mar walba u taagan yihiin wax u qabashada kalluumeysatada isla markaana ay laba jibaarayaan.
Jaamac Muuse Jaamac oo ah sarkaal ka tirsan Hay’adda IOM ayaa shaaca ka qaaday in Hay’adda IOM si toos ah ugu wareejisay Wasaarada kalluumeysiga iyo kheyraadka Badda dhisme iyo Saxiimad.
Guddoomiye kuxigeenka degmada Boosaaso Qaasim Cabdiraxmaan Caluuke iyo Guddoomiye kuxigeenka gobolka Bari Axmed Xaaji Maxamed ayaa dhankooda sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin waxqabadka ay IOM ka wado Puntland.
Wasiir kuxigeenka Kalluumeysiga iyo kheyraadka Badda Puntland Maxamed Maxamuud Gabax oo si toos ah u saxiixay waraaqaha dhismahan iyo Saxiimada lagu wareejiyey ayaa ammaan ballaaran usoo jeediyey IOM.
Maxamed Maxamuud Gabax ayaa kula dardaarmay Kalluumeysatada iney sii laba jibaaraan wax soo saarka kalluumeysiga ,waxayna si rasmi ah Waraaqihii dhismaha iyo saxiimada u kala saxiixdeen Ismaaciil Siciid Cali.
Dhismahan ayaa ah mid ay nasan doonaan kalluumeysatadu marka Badda ka yimaadaan ama ay shabaagaha ,shikadaha,liikhyada ugu kabtaan,waxaana aad usoo dhaweeyey kalluumeysatada gobolka Bari.